Wararka Maanta: Talaado, May 21, 2013-Golaha Salaadiinta Soomaaliyeed oo Muqdisho ka furtay Xarun Taageerana u Muujiyay Xukuumadda Somalia (SAWIRRO)
Kulanka ayaa waxaa ka qaybgalay mas’uuliyiin ka socday gobolka Banaadir, guddoomiyaha degmada Howlwadaag, siyaasiyiin, aqoonyahanno, salaaddiin iyo dadweyne lagu casuumay, iyadoo mas’uuliyiintii kulankaas ka qaybgalay ay soo dhaweeyeen xarunta cusub ee golaha salaadiinta Soomaaliyeed ay ka furteen magaalada Muqdisho.
Mas’uuliyiin u hadlay dowladda Soomaaliya ayaa ballanqaaday inay si hoose ula shaqeyn doonaan golaha salaaddiinta Soomaaliyeed ee fadhigoodu yahay Muqdisho, iyadoo ka dalbaday inay dib ugu soo celiyaan shanti qaybtooda ee ay ka kooban tahay Soomaaliya, isla markaasna ay dadaal u galaan sidii dib loogu soo celin lahaa nabadda Soomaaliya.
Guddoomiyaha golaha salaaddiinta Soomaaliya, Boqor Faarax Cabdi Guure, ahna boqorka beesha Jareerweyne oo xafladda ka hadlay ayaa sheegay inay ka shaqeyn doonaan sidii ay qayb weyn uga qaadan lahaayeen nabdeynta Soomaaliya, ayna la fariisanayaan qeybaha kala duwan ee Soomaalida oo uu sheegay inay ka dhaadhicin doonaan inay ka shaqeeyaan sidii nabadda dalka loo sugi lahaa.
Sidoo kale, guddoomiyuhu wuxuu mooshinka ka dhanka ah ra’iisul wasaare Saacid iyo xukuumaddiisa ayaa sheegay in xildhibaannada looga baahan yahay in fikirkooda keliya uusan noqon wax dumin, balse uu noqdo mid ay wax ku dhisayaan, dalkana ay u horseedaan nabad iyo xasilooni waarta.
“Xukuumaddu waxay jirtaa muddo lix bilood ah, mana wanaagsana in hadda laga keeno mooshin, waayo xukuumad kasta marka ay jirto muddo kooban haddii mooshin laga keeno ma dhacayso inay wax qabsoomaan,” ayuu yiri Boqor Faarax.
Ugu dambeyn, guddoomiyaha salaadiinta Soomaaliyeed wuxuu tilmaamay in ummadda Soomaaliyeed ay deeqdo nabad oo keliya loona baahan yahay in laga shaqeeyo sidii ay nabaddaas ku hirgeli lahayd, isagoo dowladda Somalia ugu baaqay inay ku garab-istaagaan howlaha nabadeynta ah ee salaadiiintu ay wadaan.
5/21/2013 12:14 PM EST